Vanonzi Vakaponda Mupurisa Votarisira Kubvisiswa Chibatiso
Chikunguru 25, 2017
Dare repamusoro reHigh Court
Varume vatatu vemuHarare vakasungwa kutanga kwaChikunguru vachipomerwa mhosva yekuuraya mupurisa, VaTalkmore Phiri, mumhirizhonga yekurwisana kwemapurisa nevanotengesera mumigwagwa, vadzoka zvakare mudare repamusoro umo nyaya yavo yekukumbira kubvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso yanga ichinzwikwa.
Gweta riri kumirira VaBarnabas Mwanaka, VaEdmore Musvubhi pamwe naVaDarlington Madzonga, VaTonderai Bhadharasara veZimbabwe lawyers for Human Rights, vanoti mutongi wedare, Justice Priscillah Chigumba, vati vachatura mutongo wavo neChitatu.
Vachuchisi vanonzi vanga vachikurudzira dare kuti rinyime varume ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vachiti vanotyira kuti vanogona kutiza munyika sezvo vakatarisana nemhosva huru kwazvo.
Asi VaBhatasara vanopikisa mashoko aya vachiti varume ava vanonzi vakapara mhosva iyi musi wa 29 Chikumi, asi VaMwanaka vakazosungwa musi wa 8 Chikunguru, VaMusvubhi naVaMadzonga vakazosungwa mazuva mana akatevera.
"Isu takaudza dare kuti hazvigone kuti varume ava vatize vachitiza nyaya iyi yekupomerwa yavanoti inyaya yekuumbiridza nekuti vese vanotaura kuti ivo vakanga vasipo panzvimbo yakaitika chiitiko chakadai so."
VaBhatasara vanoti dai varume ava vaida kutiza munyika vangadai vakatiza kare, sezvo vakanga vaine mukana mukuru kwazvo wekuita izvi, asi havana kutiza, kuratidza kuti havana mhosva yavakapara.
Vanotiwo mapurisa akundikanawo kuburitsa mudare humbowo hwevhidhiyo yekuurayiwa kwemupurisa uyu, uhwo hwaanoti anahwo hunoroverera varume vatatu ava nemhosva.
Hurukuro naVaTonderai Bhatasara